ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ် ထိုးထားပါတယ် . . . – Healthy Life Journal
ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ် ထိုးထားပါတယ် . . .
Posted on စကျတငျဘာ 19, 2019
မေး ။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ်ထိုးပြီး အောင်ထားသူက နောက်ကာလ ဘယ်လောက်ကြာမှာ ကာကွယ်ဆေး ထပ်မံထိုးရမှာလဲ။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး မထိုးခင် ဘီပိုးအောင်၊ မအောင် စစ်ရမှာလား၊ ဘီပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ရမှာလား။
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည်(ဥက္ကဌ၊ မြန်မာအသည်းဖောင်ဒေးရှင်း ) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ ။ ကာကွယ်ဆေးသုံးလုံး စထိုးထားတဲ့အချိန်တုန်းက သွေးစစ်ထားတယ်၊ ဘီပိုးမရှိဘူးလို့ အဖြေထွက်ထားတယ်ဆိုရင် ငါးနှစ်ပြည့်လို့ ထပ်ထိုးချိန်မှာ ဆေးစစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ တချို့ကျတော့ ဘီပိုးရှိ၊ မရှိ မစစ်ရဲလို့ မစစ်ဘဲ ကာကွယ်ဆေးကိုပဲ သုံးကြိမ်ပြည့်အောင် ထိုးလိုက်တာရှိတယ်။ ဒီလိုလူတွေကျတော့စိတ်မချရဘူး။ ပြန်စစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ်ထိုးပြီး နှစ်လအကြာမှာ ပဋိပစ္စည်း(Antibodies) ထွက်၊ မထွက် ပြန်စစ်လိုက်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၁၀ ကျော်ရင် ကောင်းပါတယ်။ တချို့ဆို ၁၀၀၀ ကျော်တောင်ထွက်တယ်၊ ဒီလိုလူတွေက Mpory သိပ်ကောင်းတဲ့အတွက် ပြန်ထိုးစရာတောင် မလိုပါဘူး။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အရ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး သုံးလုံးထိုးပြီး ငါးနှစ်ပြည့်ချိန်မှာ လူတိုင်း ထိုးစရာမလိုဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်လို လူတွေက Booster ထပ်ထိုးဖို့ လိုသလဲဆိုတော့ မိသားစုထဲမှာ ဘီပိုးရှိသူတစ်ဦးရှိရင် ငါးနှစ်တစ်ခါ ပြန်ထိုးသင့်တယ်၊ ပြီးတော့ ဘီပိုးလူနာတွေ၊ သွေးတွေနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုစတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ သွေးမကြာခဏ သွင်းနေရတဲ့ သွေးရောဂါသည်တွေ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ သွေးပြန်ပြီး သန့်စင်နေရတဲ့သူတွေ(Kidney Dialysis) ဒီလို လူတွေကျတော့ ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်ထိုးသင့်ပါတယ်။
Related Items:Hepatitis B
ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိသူအတွက် အာဟာရ